Kooxaha Tottenham Hotspur iyo Arsenal oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Real Madrid – Gool FM
(London) 12 Luulyo 2019. Shabakada “Sky Sports” ayaa waxay shaaca ka qaaday in kooxaha Tottenham Hotspur iyo Arsenal ay ku dagaalamayaan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Dani Ceballos inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Dani Ceballos oo 22 jir ah ayaa lala xiriirinayaa inuu ka dhaaqi doono Real Madrid suuqan xagaaga, maadaama uu doonayo inuu ku biiro koox uu si joogta ah ugu ciyaaro xili ciyaareedka soo socda.
“Sky Sports” ayaa sheegtay in Dani Ceballos uu ku sii jeedo horyaalka Premier League gaar ahaan kooxaha reer London ee Tottenham Hotspur ama Arsenal.
Shabakada ayaa sheegtay in Dani Ceballos uusan dooneynin inuu si toos ah uga tago Real Madrid, wuxuuna doonayaa in qaab amaah ah uu kaga dhaqaaqo, inkastoo Arsenal iyo Spurs ay doonayaan inay la saxiixdaan.
Macalinka kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa codsaday in si ded deg ah loo bilaabo wada hadalada ay ku doonayaan inay kula soo saxiixdaan Dani Ceballos, iyagoo miiska saari doono qiimo dhan 45 milyan oo ginni si ay ula wareegaan adeegiisa.
Halka sidoo kale kooxda Tottenham Hotspur ay qorsheeneyso in magaca Dani Ceballos ay qeyb kaga dhigto heshiiska ay Real Madrid ku dooneyso Christian Eriksen.